संखुवासभामा ६ जनाका हत्या गर्ने लोकबहादुरको एक पछि अर्को कर्तुत बाहिरिदै – Sandesh Press
September 15, 2021 595
भाद्र २१ गते सोमबार विहान एकाएक विभिन्न संचारमाध्यमा एउटा समाचार आयो । संखुवासभाको मादीमा एकै परिवारका ६ जनाको हत्या । संचारमाध्यम र सामाजिक संञ्जालमा एकै छिन खबर देश विदेश सर्बत्र छरियो । जनचासो बढ्यो प्रहरी प्रशासन घ’ट्ना स्थल तर्फ दौडिए । कसरी भयो परिवारकै सामुहिक ह’त्या गाँउमा त्रास छायो । घट्नास्थलमा प्रहरीचौकी र पछि खादवारीबाट डिएसपी लालध्वज सुवेदीको टोली पनि पुग्यो ।
प्रहरीले अनुसंन्धान सुरु गर्यो २४ घण्टा वित्नलाग्दा केहि पत्तो पाएन । धरानबाट अनुसंन्धानमा सहयोगी कुकुर सहितको टोली लिएर एसपी भीम दाहालपनि घट्नास्थलमा पुगे । त्यसको भोलीपल्ट डिएसपी रुगम कुवंर सहितको सिआईबीको टोली पनि घटनास्थलमा पुग्यो त्यसपछि सुरुभयो अनुसंन्धान । यही बिषयमा सगरमाथ आरोही बिजय घिमिरेले आफ्नो बिचार राखेका छन ।भाद्र २१ गते सोमबार विहान एकाएक विभिन्न संचारमाध्यमा एउटा समाचार
आयो । संखुवासभाको मादीमा एकै परिवारका ६ जनाको हत्या । संचारमाध्यम र सामाजिक संञ्जालमा एकै छिन खबर देश विदेश सर्बत्र छरियो । जनचासो बढ्यो प्रहरी प्रशासन घ’ट्ना स्थल तर्फ दौडिए । कसरी भयो परिवारकै सामुहिक ह’त्या गाँउमा त्रास छायो । घट्नास्थलमा प्रहरीचौकी र पछि खादवारीबाट डिएसपी लालध्वज सुवेदीको टोली पनि पुग्यो ।
प्रहरीले अनुसंन्धान सुरु गर्यो २४ घण्टा वित्नलाग्दा केहि पत्तो पाएन । धरानबाट अनुसंन्धानमा सहयोगी कुकुर सहितको टोली लिएर एसपी भीम दाहालपनि घट्नास्थलमा पुगे । त्यसको भोलीपल्ट डिएसपी रुगम कुवंर सहितको सिआईबीको टोली पनि घटनास्थलमा पुग्यो त्यसपछि सुरुभयो अनुसंन्धान । यही बिषयमा सगरमाथ आरोही बिजय घिमिरेले आफ्नो बिचार राखेका छन ।
Prevटीकटक बनाउन लाग्दा सेतिमा हेर्दा हेर्दै ख’सेपछि ! विबाह गरेको ५ दीनमै टीकटकले लियो ज्यान
Nextयी अक्षरबाट नाम शुरु हुने युवतीहरु हुने गर्छन् सुन्दर र भाग्यमानी !
जाममा परेकी श्रीमती लिन जाँदै गर्दा आफै अस्ताए केशव